A na-eji Baịbụl akụziri anyị ihe ndị na-abara anyị uru. Ná ngwụcha izu ọ bụla, a na-enwe onye ga-eji nkeji iri atọ gwa ndị bịara ọmụmụ ihe okwu si na Baịbụl. A na-akpọ okwu ahụ ọ na-ekwu Okwu Ihu Ọha. Ọkà okwu ahụ ga-akọwa otú Chineke chọrọ ka anyị si na-akpa àgwà, kọwaakwa otú ihe Baịbụl kwuru si na-emezu n’oge anyị a. Ọ gụwa Baịbụl, ọ na-agwa mmadụ niile ka ha sapeta Baịbụl nke ha ma na-ele anya ebe ọ na-agụ. E kwuchaa okwu ihu ọha, anyị na-enwe ọmụmụ ihe ọzọ na-ewe otu awa. A na-akpọ ya Ọmụmụ Ihe “Ụlọ Nche.” Anyị na-amụ otu isiokwu dị n’Ụlọ Nche anyị nke a na-amụ amụ. Ọ na-abụ ajụjụ na azịza, onye ọ bụla nwekwara ike welie aka zaa ajụjụ. Ihe anyị na-amụta n’ọmụmụ ihe a na-enyere anyị aka ime ihe Baịbụl kwuru. N’ụwa niile, ọgbakọ Ndịàmà Jehova dị ihe karịrị otu narị puku. Isiokwu a mụrụ n’ebe a ka a ga-amụ n’ụwa niile.
Anyị na-amụ otú e si akụziri ndị mmadụ Okwu Chineke. Tupu ngwụcha izu, anyị na-enwe ọmụmụ ihe ọzọ. Ọ na-adị ụzọ atọ. A na-akpọ nke mbụ Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ. Ọ na-abụ ajụjụ na azịza nke na-ewe nkeji iri atọ. Ọmụmụ ihe a na-enyere anyị aka ịghọtakwu ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru, a na-ejikwa ya akọwara anyị amụma ndị dị na Baịbụl. Anyị mụchaa nke ahụ, anyị abanye na nke ọzọ a na-akpọ Ụlọ Akwụkwọ Ije Ozi Ọchịchị Chineke. Ọ na-ewe nkeji iri atọ. A na-ebu ụzọ kwuo ihe anyị kwesịrị ịmụta n’amaokwu Baịbụl a gwara mmadụ niile ka ha gụọ n’ụlọ ha. E mechaa nke ahụ, a gwa ụmụ akwụkwọ e nyere isiokwu ha ga-akwadebe n’ụlọ ka ha pụta mee ihe omume ha. E nwere onye ọrụ ya bụ inye ụmụ akwụkwọ mere ihe omume ndụmọdụ. A gbasaa ọmụmụ ihe ụbọchị ahụ, onye ahụ ga-akpọ ụmụ akwụkwọ ndị mere ihe omume, gwa ha ihe ndị ọ chọpụtara ga-enyere ha aka imekwu nke ọma ma ha na-agụ ihe ma ọ bụ na-akụziri mmadụ ihe. (1 Timoti 4:13) Ọmụmụ ihe ikpeazụ anyị na-enwe n’ụbọchị ahụ bụ nke a na-akpọ Nzukọ Ije Ozi. Ọ na-ewe nkeji iri atọ. Otu onye nwere ike pụta kọwaa otú anyị ga-esi na-akụziri ndị mmadụ Baịbụl. A na-enwekwa nke mmadụ ole na ole ga-apụta gosi anyị otú anyị ga-esi eme ihe e kwuru ma ọ bụkwanụ a gbaa mmadụ ajụjụ ọnụ ka o kwuo otú yanwa si mee ya.
Ọ bụrụ na ị bịa ọmụmụ ihe anyị, otú a ga-esi akụziri gị Baịbụl ga-amasị gị.—Aịzaya 54:13.
mailto:?body=Olee Otú Anyị Si Amụ Ihe?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012148%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Olee Otú Anyị Si Amụ Ihe?